Ukuphupha uLwandle Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa sikwindawo eselunxwemeni, sidla ngokutsalelwa elunxwemeni lolwandle. Ukusuka apha ungabona ubukhulu bolwandle, yenza iingcinga zakho kwaye wonwabele indalo. Uninzi lwabantu lukwava imvakalelo yenkululeko ngaselunxwemeni lolwandle kwaye banokufumana amandla okusombulula iingxaki zabo zemihla ngemihla.
Konke oku kunokwenzeka nasemaphupheni ethu: nalapha sinokuba kunxweme lolwandle, sijonge oku kwaye sineemvakalelo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, akusoloko kufuneka babe neemvakalelo ezilungileyo. Kuyenzeka ukuba ulwandle lubonakale lusoyikisa ephupheni, unxweme alusenakukhusela umntu ekubhekiswa kuye kubundlobongela balo kwaye luyoyika kwaye lunexhala lokuba luza kumthatha. Kodwa amaphupha athetha ntoni ngolwandle nangonxweme?
1 Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, ukubona ulwandle ukusuka elunxwemeni kunokuhlala kunjalo Utshintsho uphawu ebomini bakho. Ngubani ophupha oku kubomi bokwenyani kwinqanaba lokutshintsha, ukolulwa okuthile kuya kuphela okanye kufuneka kugqitywe ngokuphupha. Nangona kunjalo, awungekwazi ukuba loluphi ulwalathiso ekufuneka ulwenzile. Ke ngoko, awuqinisekanga ukuba ufuna ntoni ngekamva lakho kwaye zeziphi iindlela ezinokukhokelela kwiinjongo zakho zobuqu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka unethemba lokuba nokuba ukhetha njani, yonke into izakulunga ekugqibeleni.
Nabani na ophupha ngokuqhuba ngaselunxwemeni lolwandle kufuneka akhangele ezinkulu. Iingxaki enokuthi, nangona kunjalo, inokukhokelela kulonwabo lwakho. Umntu ochaphazelekayo okwangoku unokuninzi anokukuphumeza kwiindawo ezahlukeneyo zobomi, banokuziva boyisiwe, kodwa ubuncinci bengaxabiswanga ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, uya kuba nakho ukuguqula obu bunzima bube lulutho kwaye, ekugqibeleni, uya kuvuzwa ngokufanelekileyo ngemizamo yakho.
Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolikwa kwengqondo
Ulwandle, okanye amanzi ngokomgaqo, limele kutoliko lwengqondo lwephupha ilizwe leemvakalelo ngokwalo, ngokomda kunqunyulwa elunxwemeni. Ukuba liphupha elihle apho ukuhlala okanye ukuhamba ngaselwandle kubonwa njengokuthandekayo, oku kubonisa okwakho. Ibhalansi phakathi. Ukuphupha kugcina iimvakalelo zakho ziphantsi kolawulo, kodwa awuzibambi. Ngale ndlela, uyakwazi ukumisela unxibelelwano olufanelekileyo phakathi komntu wangaphakathi, umphefumlo wakhe, el mundo ngaphandle, inyani kunye nemeko yezentlalo.
Kwangelo xesha, ngokuka-psychoanalysts, oku kuhamba kunye nokungqubana phakathi kwe-subconscious kunye ne-conscious level. Ingqondo neemvakalelo zikhona Ubunye kunye
Okuchaseneyo kusebenza kumaphupha ayoyikisayo: nabani na oyika ukuba ulwandle lunokuphuphuma unxweme ngenxa yamandla alo amakhulu, alukhuselekanga, ukwimpilo yokwenyani neyakhe. iimvakalelo Ukoyiswa. Ukuphupha akunakho ukumisela ezi, oko kukuthi, basoyikisa ukulawula ingqondo yakho. Awusakwazi ukucinga ngokucacileyo kwiimeko ezithile kuba iimvakalelo zakho zilawulwa ngandlela zonke.
Nangona kunjalo, ukuba iphupha liselunxwemeni lolwandle oluboshwe ngamatye okanye ngekhonkrithi, oku kukhulu kakhulu. Amandla engqondo phakathi. Kule meko, umntu ekuthethwa ngaye uyazicinezela iimvakalelo zakhe kwaye ubashiyele indawo encinci kubomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «elunxwemeni» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya ulwandle lubonisa enye ephupheni. indlela emfutshanephakathi kwezinto ezibonakalayo kunye nengaphakathi, umphefumlo, umoya kunye nokomoya.